ज्याेति लाइफले धिताेपत्र बाेर्डमा दियाे आवेदन , कति कित्ता शेयर ल्याउला ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyज्याेति लाइफले धिताेपत्र बाेर्डमा दियाे आवेदन , कति कित्ता शेयर ल्याउला ?
ज्याेति लाइफले धिताेपत्र बाेर्डमा दियाे आवेदन , कति कित्ता शेयर ल्याउला ?
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६६ करोड रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीले ६६ लाख कित्ता प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। ६६ करोड रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्काशन गरे सँगै चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।
शेयरबजारमा चलखेलकाे हल्ला , के भन्छन् अधिकारीहरू ?
सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) परिसूचक ७२ अंकले बढेर दुई हजारमाथि पुग्यो ।यो बृद्धिले आइतबार नेप्सेमा गएको १२३ अंकको पहिरोबाट आत्तिएकाहरूलाई केही राहतदियो । पछिल्लो तीन महिनामा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५ सयभन्दा धेरै अंकले उकालोलागेको छ । स्टक बजार घटबढलाई असमान्य मानिँदैन । तर पछ…
कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। बोर्डबाट अनुमति पाउने बित्तिकै कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न सक्नेछ।
के छ नेपाल टेलीकमकाे शेयर मूल्य बढ्नुकाे रहस्य ?
पछिल्लो तीन महिनायता नेपाल टेलिकमका सेयरधनीले पछाडि फर्किएर हेर्नु परेको छैन।हरेक दिन टेलिकमका लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढेको बढेकै छ । पछिल्लो समय टेलिकमकोसेयरमा कति धेरै आकर्षण देखिएको छ भने दैनिक ४० करोडभन्दा बढी रकमको कारोवार हुनथालेको छ । प्रतिकित्ता १२ सय हाराहारी पुगिसकेको टेलिकमको सेयर दिर…
Previous articleथप १ हजार ३८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि